အကြောင်းအရာအာဏာပိုင် - အဲဒါဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ၊ ဘယ်လိုရယူရမလဲ။
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 8, 2015 စနေနေ့, မေလ 7, 2016 Douglas Karr
ကျနော်တို့အကြောင်းအများကြီးပိုပြီးရေးသားဖို့တာပေါ့ အကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာသို့သော်ထိုအယူအဆကိုမိတ်ဆက်ချင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဂျင်စီ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏အကူအညီဖြင့်ချထားခဲ့သည် Metonymy မီဒီယာ နှင့် Dittoe PR.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်လက်ရှာရမည့်စိန်ခေါ်မှုမှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုဖြန့်ကျက်နေသည့်အချိန်တွင်မဟာဗျူဟာကင်းမဲ့နေပုံရသည်။ Altimeter ကြောင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် စျေးကွက်၏ ၇၀% သည်တစ်သမတ်တည်းသို့မဟုတ်ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောမဟာဗျူဟာကင်းမဲ့သည်.
သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကြိုတင်လိုအပ်ချက်များနှင့် Post- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှစ် ဦး စလုံးရှိပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်:
အမှတ်တံဆိပ် - သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ခိုင်မာသည့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကိုလိုအပ်သည်။
messaging - ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ပရိသတ်နှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူသည်ကိုနားလည်ရန်သုတေသနပြုရန်လိုသည်။
အကြောင်းအရာ - ကုမ္ပဏီများသည်အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အွန်လိုင်းတွင်သုတေသနပြုခြင်း၊ သင်၏တန်ဖိုးနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းတို့ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် ဦး တည်သည့်အဖြေများကိုပေးသည့်အကြောင်းအရာများကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ကိုအလယ်အလတ်တွင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း - ကုမ္ပဏီများသည်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်နှင့်အမျှထိုအကြောင်းအရာကိုပရိသတ်အသစ်များရောက်ရှိရန်နှင့်ရရှိရန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လစာရှာဖွေခြင်းသာမကမျှဝေခြင်း၊ ရရှိခြင်းနှင့်ပေးဆောင်ခြင်းခံရသောမီဒီယာများကိုအများဆုံးဖြစ်စေသည့်လူမှုရေးနှင့်အများပြည်သူနှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - မည်သည့်အရာများလုပ်ဆောင်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အကြောင်းအရာလိုအပ်ချက်များပိုမိုဖွံ့ဖြိုးရန်ကွာဟချက်များကိုပြည့်စုံစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏စာတိုပေးပို့ရေးကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပင်ပြသလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖောက်သည်များမှာခိုင်မာသည့်အမှတ်အသားမရှိခြင်း (သို့) မည်သူမည်သူရေးသားနေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့မည်သို့ပါဝင်သည်ကိုလည်းကောင်းနားမလည်သည့်တိုင်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်တိုက်ရိုက်သွားလိုသောဖောက်သည်များရှိသည်။ နှင့်အခြားအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရန်မဟာဗျူဟာမရှိဘဲအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင်သည်။
သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုလွန်မဟာဗျူဟာများတွင်အားနည်းချက်များရှိပါကသင်တည်ဆောက်နေသည့်အကြောင်းအရာ၏သက်ရောက်မှုအလားအလာကိုသင်အပြည့်အဝနားမလည်နိုင်ပါ။
အကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာဆိုသည်မှာသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်သုတေသနသည်မည်သည့်အရာကိုရေးသားရမည်ကိုမပေးရုံသာမကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှထိုအကြောင်းအရာ၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထိရောက်သောပါဝင်သည့်အခွင့်အာဏာရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သောသင်၏အကြောင်းအရာသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၊ လူမှုမီဒီယာများ၊ ပြင်ပသက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မြင်ကွင်းများကိုပိုမိုမြင်သာစေသည်။
အကြောင်းအရာအာဏာပိုင်တစ် ဦး ဆောင်တတ်၏ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင့်ရဲ့ content ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုမှချဉ်းကပ်။ ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးတိုင်းတာမှုဆက်လက်တည်မြဲရန်တိုင်းတာသည်။
သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ စာတိုပေးပို့မှုနှင့်အကြောင်းအရာရှုထောင့်တိုင်းကိုသင်ကြည့်ရှုနေသောကြောင့်မက်ထရစ်တွင်ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ရောင်းအားတက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန် element အားလုံးပါဝင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏ခရီး (တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ) အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဖမ်းယူပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်များ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အမြင်များ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရှယ်ယာ, etc
Content Authority အမှန်တကယ်ဖောက်သည်များအားမည်သို့မောင်းနှင်သည်ကိုရိုးရှင်းသောဥပမာတစ်ခုပေးပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသုံးစွဲသူ၏အကြောင်းအရာနှင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသုံးစွဲသူ၏လ၏လစဉ်စာရင်း။ ခြုံငုံကြည့်လျှင်၊ သူတို့သည်စာမျက်နှာ ၁ ၏အောက်ဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီမှာထုတ်လုပ်၊ မျှဝေ၊ ရာထူးတိုးတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ ပျှမ်းမျှအဆင့် (၄) အဆင့်မှ (၄) အဆင့်အရဤအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာ၏တန်ဖိုးသည်သုံးစွဲသူမှထုတ်လုပ်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုလွှမ်းမိုးစေသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းထိုရာထူးများပေါ်ရှိကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည်စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးသို့မဟုတ်စာမျက်နှာ ၂ ၏ထိပ်ထက်အဆပိုများသည်။
အကြောင်းအရာအာဏာပိုင်ဟူသောဝေါဟာရကိုရေးသားခဲ့သည် Bryant Tutterow ဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီအများအပြားတွင်မဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်။ သန့်စင်သူဖြစ်သည် ရလဒ်များအလွန်အကျိုးစီးပွားပိုဆိုးနှင့်တူ၏။ ဆက်သွယ်မှုကြားခံများ၊ အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများနှင့်ပရိသတ်နေရာများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အတူတကွကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အဆင့်ကို ၉၄၀% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မကြာမီအနာဂတ်မှာအကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာအကြောင်းအများကြီးရေးသားလိမ့်မယ်။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်အကြောင်းအရာများစွာကိုအွန်လိုင်းတွင်ထုတ်ဝေနေသော်လည်းသင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမတွေ့ရပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ DK New Media ကျနော်တို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။
Tags: bryant tutterowအကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာအကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်နည်းဗျူဟာအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာDK New Mediaစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်ရှာဖွေခွင့်အာဏာလူမှုမီဒီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဘာဖြစ်သလဲအကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာကဘာလဲWhitepaper
မတ်လ 11, 2015 မှာ 1: 48 pm တွင်
ဧပြီ 18, 2016 မှာ 12: 36 AM
Ankit Runwal ဖြစ်သည်
12:2016 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 24 မှာ
13:2016 pm တွင်စက်တင်ဘာ 8, 53 မှာ